Fahasalamana :: Mitaky ny hisian’ny politika nasionaly ireo mpitsabo amin’ny zava-maniry • AoRaha
Fahasalamana Mitaky ny hisian’ny politika nasionaly ireo mpitsabo amin’ny zava-maniry
Mangataka ny hisian’ny politika nasionaly manokana ireo mpikaroka amin’ny fitsaboana mifototra amin’ny zava-maniry. Nambaran’izy ireo fa ny fisian’izany no antoka hanomezan-danja ny fikarohana sy mba hialana amin’ireo fanafody tsy nahazoana alalana, mitobaka eny an-tsena . Tanjona ihany koa ny mba hanampy ireo mpikaroka satria misedra olana goavana izy ireo amin’ny fikarohana hataony.
“Mila vola roa alina Euros ny fanaovana fikarohana amin’ny zava-maniry iray. Maharitra telo taona anefa izany amin’ny zava-maniry iray ka mila vola enina alina euros izany raha atambatra, izay vao mahavita fikarohana hatramin’ny farany”, araka ny fanazavan’ny dokotera Andrianjara Chares, tale jeneralin’ny Ivon-toerana malagasy mahakasika ny fikarohana mivelatra na “IMRA”, nandritra ny famelabelaran-kevitra momba ny fikirakirana ny fitsaboana ara-java-maniry, teny Analakely, ny sabotsy lasa teo.
Araka ny fantatra, zava-maniry manodidina ny telo arivo karazany no misy eto Madagasikara, izay azo ampiasana amin’ny fitsaboana. Voalaza fa manana ho avy mamiratra ny fitsaboana amin’ny zava-maniry raha vaotrandraka avokoa izy ireny. Efa misy rahateo ny olona mampiasa sy mivarotra ary misitraka ireny fanafody vita fikarohana ireny.
“Nanana olana teo amin’ny vavony aho ary nivalana mihitsy aza. Fanafody mifototra amin’ny zava-maniry manasitrana vavony no nohaniko ary nahitako vokany lehibe mihitsy”, hoy, ohatra, i Hery, mpanatrika ny famelabelarana. “Manan-karena amin’ny lafiny zava-maniry fitsaboana i Madagasikara saingy anisan’ny olana hafa sedrain’ny mpikaroka ny fahazoan’ny fianakaviana ny fanafody. Mbola maro ireo mpitsabo no tsy manome an’ireo marary satria tsy fantatr’izy ireo ny zava-tsoa amin’ny alalan’izany fitsaboana natoraly izany”, hoy ny fanampim-panazavan’ny talen’ny IMRA.
Fahasalamana :: Mitaky ny hisian’ny politika nasionaly ireo mpitsabo amin’ny zava-maniry - ewa.mg dit :
16/04/2019 à 00:37
[…] Fahasalamana :: Mitaky ny hisian’ny politika nasionaly ireo mpitsabo amin’ny zava-maniry est apparu en premier sur […]
Tranga voajanahary :: Nihetsika ny tany teto Antananarivo
Fampianarana ambony :: Mbola malalaka ny tontolon’ ny asa amin’ny sehatra sosialy